Warka - Shixnadda waxaa si habsami leh loogu fuliyay cagafcagafyada ku hoos jira Mashruuca Batroolka Qaranka ee Ruushka
Sebtembar - Xilliga deyrta ayaa iman doona, xilli goosasho leh miro hodan ah iyo udgoon faafin ah! Cagaf-cagaf oo ku duugan shaqada adag ee shaqaalaha HBXG ee Mashruuca Petroplem ee Ruushka ee ay ku guuleysatay HBXG ayaa si guul leh mar labaad loogu raray suuqa CIS!
Tani waa iibka qandaraaska labaad ee loogu talagalay rarka taxanaha TY165-3 ee shirkadda Batroolka Ruushka. Shirkadda Ruushka ee batroolka waxay aad ugu qanacsan tahay waxqabadka hawlgalka ee qaybtii ugu horreysay ee alaabooyinka SHEHWA ee taxanaha TY165-3, gaar ahaan heer sare waxqabadka heerkulka hooseeya iyo kalsoonida wanaagsan.
Taxanaha TY165-3 cagaf cagafku waa qaab dhismeedka caadiga cagaf cagaf ah oo ay soo saartay HBXG iyadoo lagu saleynayo ka faa'iideysiga faa iidooyinka qaab dhismeed ee Caterpillar "bulldozer" iyo faa'iidooyinka gudbinta ee komatsu "s D55 bulldozer". oo leh isku-xirnaan kaydinta koronto oo ballaaran oo la isku halleyn karo & waaritaan. Nidaamka jiifku kordhay wuxuu hagaajiyaa awoodda mashiinka oo dhan si uu ula qabsado xaaladaha shaqada ee adag.
Tan iyo bilowgii sanadkan, Cudurka 'COVID-19' wuxuu ku faafay adduunka. Intii lagu guda jiray shaqo wanaagsan kahortagga iyo xakamaynta cudurrada, HBXG waxay fiiro gaar ah siisaa hagaajinta maaraynta gudaha, waxay dedejisaa hagaajinta wax soo saarka iyo xakamaynta tayada, waxay diiradda saareysaa cabashooyinka macaamiisha, waxay si deg deg ah wax uga qabataa, waxay hagaajineysaa heerka adeegga, waxayna hagaajineysaa qanacsanaanta macaamiisha. Dhanka kale, mugga iibka suuqa ayaa xaqiiqsaday koror joogto ah.